China China soplaya 1050 1060 1070 1100 aluminum mpempe akwụkwọ eriri igwe emepụta na suppliers | Huifeng
6063, 6082, 7075 wdg
H32 H24 H16 H18 Nke H111 H112 T3 T351 T4 T42 T6 T651
Obosara nke DC:
Obosara nke CC
Mill imecha, embossing, anodized, agba mkpuchi, Polishing
Aluminum eriri igwes na-ọtụtụ-eji ngwá electronic, nkwakọ, ewu, ígwè, wdg
Aluminum eriri igwe nhazi ọkwa
1000 usoro aluminom na eriri igwe
A na-akpọ mpempe akwụkwọ aluminom na-anọchite anya usoro 1000 dị ọcha aluminom. N'ime usoro niile, usoro 1000 bụ nke usoro ahụ nwere nke kachasị aluminom. Ọcha nwere ike iru ihe karịrị 99,00%. N'ihi na ọ nweghị ihe ndị ọzọ dị na teknụzụ, usoro mmepụta dị mfe ma ọnụahịa dị ọnụ ala. Ọ bụ ugbu a usoro a na-ejikarị na ọrụ ndị a na-ejikarị eme ihe. Imirikiti ngwaahịa ndị na-ekesa n'ahịa bụ usoro 1050 na 1060. Mpempe akwụkwọ 1000 nke aluminom na-ekpebi obere aluminom nke usoro a dịka ọnụọgụ abụọ nke Arab. Dịka ọmụmaatụ, ọnụọgụ abụọ nke Arab nke ikpeazụ nke usoro 1050 bụ 50. Dịka ụkpụrụ aha mba ụwa si dị, ọdịnaya aluminom ga-eru 99.5% ma ọ bụ karịa ka ọ bụrụ ngwaahịa tozuru oke. obodo m nke alloy alloy technical standard (gB / T3880-2006) na-ekwuputa nke oma na ihe aluminom nke 1050 ruru 99.5%. N'otu aka ahụ, ọdịnaya aluminom nke usoro 1060 nke aluminom ga-eru 99.6% ma ọ bụ karịa
2000 usoro aluminom efere na eriri igwe
Onye na-anọchite anya 2A16 (LY16) 2A06 (LY6) 2000 nke a na-ahụ anya nke efere aluminium nwere nnukwu ike, nke ọdịnaya nke ọla kọpa kachasị dị elu, ihe dị ka 3-5%. Usoro 2000 nke aluminom bụ ihe eji eji aluminom, nke anaghị ejikarị ya na ụlọ ọrụ ndị a.
3000 usoro aluminom na eriri igwe
Karịsịa n'aha 3003 3003 3A21. A pụkwara ịkpọ ya efere aluminom mgbochi. obodo m nke 3000 nke usoro ihe eji emeputa aluminom di oke nma. Ngwongwo 3000 nke aluminom mere nke manganese dika isi ihe. Ọdịnaya dị n'etiti 1.0-1.5. Ọ bụ a usoro na mma mgbochi nchara na-arụ ọrụ. Ọ na-ejikarị na iru mmiri gburugburu dị ka ikuku conditioners, friji, na undercars. Ọnụahịa ahụ dị elu karịa nke usoro 1000. Ọ bụ a ọtụtụ ndị na-eji alloy usoro.
4000 usoro aluminum efere na eriri igwe
Igwe aluminom nke usoro 4A01 4000 na-anọchi anya ya bụ nke usoro nwere ọdịnaya dị elu nke silicon. Ọ na-abụkarị ọdịnaya silicon dị n'etiti 4.5-6.0%. Ọ bụ nkeihe owuwus, n'ibu akụkụ, ibe ya bụrụ ihe, ịgbado ọkụ ihe; ala agbaze ala, ezigbo mmebi mmebi nke nkọwapụta ngwaahịa: Ọ nwere njirimara nke nguzogide okpomọkụ ma na-eyi nguzogide
Na-anọchi anya usoro 5052.5005.5083.5A05. The 5000 usoro aluminum efere bụ nke ndị akacha eji alloy aluminum efere usoro, isi mmewere bụ magnesium, na magnesium ọdịnaya bụ n'etiti 3-5%. A pụkwara ịkpọ ya alloy aluminom-magnesium. Ihe ndị bụ isi bụ obere njupụta, ike mgbatị dị elu na nnukwu elongation. N'otu mpaghara ahụ, ịdị arọ nke aluminom-magnesium alloy dị ala karịa usoro ndị ọzọ. Ya mere, a na-ejikarị ya eme ihe n'ụgbọelu, dị ka tank mmanụ ụgbọ elu. A na-ejikwa ya na ụlọ ọrụ ndị a na-ejikarị eme ihe. Nhazi teknụzụ na-aga n'ihu na mgbatị na ntụgharị, bụ nke usoro a na-ekpo ọkụ nke aluminom, yabụ enwere ike iji ya maka nhazi ọsịsọ miri emi. Na mba m, 5000 usoro aluminom bụ otu n'ime usoro tozuru etozu nke aluminom
6000 usoro aluminom mpempe akwụkwọ na eriri igwe
Nnọchianya 6061 tumadi nwere ihe abụọ nke magnesium na sịlịkọn, n'ihi ya, ọ ụtụtụ uru nke 4000 usoro na 5000 usoro 6061 bụ a oyi-emeso aluminum esorowo ngwaahịa, adabara ngwa na-elu chọrọ maka corrosion-eguzogide ma ọxịdashọn. Ezi ịrụ ọrụ, njirimara njirimara dị mma, mkpuchi dị mfe, na ezigbo nhazi. Enwere ike iji ya na ngwa ọgụ dị ala na nkwonkwo ụgbọ elu.
Njirimara n'ozuzu nke 6061: njirimara njirimara mara mma, mkpuchi dị mfe, ike dị elu, ịrụ ọrụ dị mma, na nguzogide corrosion siri ike.
Ihe eji eme ihe nke 6061 aluminom: akuku ugbo elu, akuku igwefoto, di na nwunye, ngwa mmiri na akụrụngwa, ngwa elektrọnik na nkwonkwo, ihe eji achọ mma ma ọ bụ ngwaike dị iche iche, isi mgbatị, isi magnet, piston breeki, piston hydraulic, ngwa eletriki, valves na akụkụ valve.
7000 usoro aluminum mpempe akwụkwọ na eriri igwe
Onye nnochite anya 7075 nwere zinc. Ọ bụkwa nke usoro ụgbọelu. Ọ bụ ngwongwo aluminom-magnesium-zinc-copper, alloy na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, na ngwongwo aluminom siri ike nke nwere ezigbo mgbochi na-eyi. 7075 aluminom efere na-enwe nchekasị na agaghị enwe nrụrụ ma ọ bụ mebie mgbe emechara. A na-achọpụta ihe niile dị elu nke 7075 efere aluminom, nke nwere ike hụ na enweghị mmerụ na adịghị ọcha. 7075 aluminum efere nwere akwa kwes conductivity, nke nwere ike ebelata na-etolite oge ma melite ọrụ arụmọrụ. Ihe kachasị mkpa bụ na ike nke 7075 bụ nnukwu ike, nke nwere ike dị elu nke aluminom, nke a na-ejikarị arụpụta ihe ụgbọ elu na ọdịnihu. Ọ na-achọ imepụta akụkụ nrụpụta nrụgide dị elu ma na-akpụzi nwere nnukwu ike na nguzogide nrụrụ siri ike.
8000 usoro aluminum mpempe akwụkwọ na eriri igwe
Ihe a na-ejikarị eme ihe bụ 8011, nke bụ usoro ndị ọzọ. Na ncheta m, efere aluminom nke ọrụ ya bụ ịme mkpuchi okpu na-ejikwa radiators, ọtụtụ n'ime ha bụ aluminium. Ejighi ya.
"Jinan Huifeng aluminum Co., LTD". Bụ ọhụrụ guzobere aluminum nhazi mmepụta enterprise, restructured si ala-na-agba ọsọ enterprise, emi odude ke China "bilie obodo" - PingYin asị nke Jinan obodo n'ókèala, na-ekpuchi ebe ihe karịrị 600 acres.
Akụrụngwa mmepụta ihe na-agbaze na nkedo, otu igwe na-emegharị okpukpu abụọ a na-agbanwe agbanwe, igwe na-agagharị oyi, igwe na-akpụgharị, igwe na-efegharị efegharị efegharị, na-ehulata nkenke, nkenke na-ahụ igwe na 260 igwe mkpuchi mkpuchi.
Obosara dịgasị iche iche
Max n'ibu ibu
Hot Rolling na nkume igwe nri
Na-aga n'ihu mgbatị Rolling na nkume igwe nri
Oyi Rolling na nkume igwe nri
High ziri ezi oyi Rolling akara
Eriri kwụ ọtọ
Wave akpacha ajị akara
Akpacha ajị ahịrị
Nke gara aga: 1060 0.55mm aluminom warara maka celling
Osote: Reflection Aluminom Mirror mpempe akwụkwọ 3003 3004 3105 Alloy For Dechọ Mma
aluminum n'elu ụlọ eriri igwe
China Aluminium eriri igwe
Ihe ịchọ mma aluminum
ulo oru aluminum eriri igwe
Elu àgwà 1060 1100 3003 3105 5052 Pee PVDF p ...